IGoogle Chrome inokubandakanya isibhlisi sendalo | Iindaba zeGajethi
UGoogle Chrome unokubandakanya isibhlisi sentengiso sendalo
Inkqubo kaGoogle Canary Chrome I-Android iqalile ukusebenza ngokuthe ngcembe kwabanye abasebenzisi isibhengezo sentengiso sendalo ezinokuthi zibandakanywe kuhlobo oluthile lwesikhangeli se-Chrome nakwiikhompyuter zedesktop.
Canary Chrome luguqulelo olukhethekileyo lwesikhangeli esaziwayo seGoogle Chrome esenziwe ngokuchanekileyo ukuze kuvavanywe loo misebenzi mitsha kunye neempawu ezingekakulungeli ukukhutshwa kwisikhangeli "esisemthethweni" nakuluntu ngokubanzi. Ngenxa yoko, ayizizo zonke iindaba eziboniswe apha ezigqitywa ukwenziwa kwiChannel.
Iintengiso zikaGoogle? Ewe kodwa ...
Ekuqaleni kuka-2017, The Wall Street Journal esidlangalaleni ukuba ingxilimbela yokukhangela icwangcise ukuphuhlisa kunye nokuphumeza eyayo ibhlokhi yentengiso kwisikhangeli sayo seChannel. Le blocker yayiza kusebenza kwii-smartphones kunye neepilisi kunye neekhompyuter zekhompyuter kunye neelaptop. Emva kwesiqingatha sonyaka sinolo lwazi emoyeni, uGoogle uqalile ukwenza ukuba isibhengezo sentengiso sisebenze Canary Chrome, lo nto usesigaba sokuvavanya kwaye kuphela kubasebenzisi abathile.
Impikiswano enkulu yako konke oku yile Ngokusisiseko uGoogle uhlala kwintengiso; ngaphezulu kwe-80% yengeniso yayo ivela kwiqonga layo lentengiso, ke ngoko kunokuba yinto ephikisanayo nangona kunjalo, inkampani sele ichazile ukuba ibhloko blocker yayo Iya kusebenza kuphela kwezi ntengiso zonakalisa amava omsebenzisi, apho sinokufumanisa ukuba ayizukukhetha iintengiso eziyinxalenye yeqonga layo lentengiso yeAdsense.
Ngayiphi na imeko, ayisiyonto esemthethweni kwaye zininzi iindaba zokuba, emva kokudlula kwiChannel Canary, zanyamalala ngaphandle kwentlungu okanye uzuko, Akuqinisekiswanga ukuba uGoogle uya kuthi ekugqibeleni afake i-ad-blocker kwisikhangeli sayo. Kodwa, ukuba uyakwenza oko, ucinga ntoni ngalo msebenzi? Ngaba ukhetha i-blocker yemveli engabandakanyi iintengiso ze-Adsense okanye uya kuqhubeka nokusebenzisa eyakho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » UGoogle Chrome unokubandakanya isibhlisi sentengiso sendalo
I-Spotify sele inababhalisi abahlawulayo abazizigidi ezingama-60